Jabulisa Ngedayari Yengane Eyi-Wimpy - Ukuzijabulisa
Jabulisa Ngedayari Yengane Eyi-Wimpy
Yini Ekhona Kwidayari Yengane Eyi-Wimpy?
Ake Sibone Ukwenziwa Kwedayari Yengane Ene-Wimpy
Idayari ye-Wimpy Kid, esekelwe UJeff Kinney uchungechunge lwamanoveli oluphumelele emhlabeni wonke, luqale ku-Disney Plus. Kulandela u-Greg Heffley, igama elibizwe ngokuthi u-Wimpy Kid, njengoba ezabalazela ukuqeda esikoleni esiphakathi kanye nazo zonke izinkinga zaso. Ku-Disney Plus’ Diary of a Wimpy Kid, izinkinga ezihlala njalo zomlingisi oqavile ongakaphumi zibekwe ngokudlalayo esikhungweni.
Ngemuva komdlalo oyimpumelelo wamafilimu amane abukhoma asuselwe ochungechungeni lwezincwadi ezidumile zikaJeff Kinney, umqondisi uSwinton Scott uqala kabusha i-franchise njengefilimu epopayi, kanti ngenkathi umkhiqizo onomqondo omuhle uzizwa ungelutho ngezinye izikhathi, usungula ubuwena, ngezikhathi ezithile. idlula eyandulelayo yesinema ngokwanele ukulenza iwashi elifanele.
Funda kabanzi:- Ulwazi Oluphelele Oluphelele Lwe-Prime Show lwango-2021!
Yini ekhona empilweniIdayari ye-Wimpy Kid?
U-Greg Heffley kanye nomngane wakhe omkhulu u-Rowley Jefferson bamiselwe ukuqala esikoleni esiphakathi. URodrick ongumfowabo omdala umeluleka ngokuthi angaphila kanjani, egcizelela ukubaluleka kokugwema iCheese Touch, okuthiwa yenza umuntu angathandwa kakhulu. UGreg uzama ukuncenga uRowley ukuthi akhule, acishe amtshele ngeThe Cheese, kodwa unquma ngokumelene nakho njengoba engafuni ukumethusa kakhulu.
U-Greg uzama ukusiza u-Rowley ukuthi ajwayelane nosuku lokuqala, kodwa bobabili benqatshwa inqwaba yezingane, ngenxa yemigilingwane yentsha ka-Rowley nokukhetha kwakhe inkulumo ethi Dlala phezu kwe-Hang Out. Naphezu kwalokhu, babalekela ukuwela phansi ohlwini lwabaphathi besikole.
UGreg noRowley baphoqelekile ukuthi bahambe nomfowabo kaGreg omncane uManny ngobusuku be-Halloween. U-Greg uqala ngokucasuka, kodwa ngokushesha uyabona ukuthi ingubo ekhangayo yasolwandle ka-Manny ibavumela ukuthi bathole inani elikhulu lamaswidi. UManny noRowley bagcina bekhathele, kodwa uGreg uphikelela nokuqhubeka nokuthatha indlela enqamulelayo eSnake Road, ephikisana nokuphikisa kukanina uSusan. Bazithela phezu kwentsha emithathu eqhubeka ibahleka usulu futhi ibaxoshe emgwaqeni ngamabhaluni amanzi.
Funda kabanzi:- Abadinwe Ukuqhamuka Nenhlanganisela Yamahlaya Nezothando
Intsha iyazibalekela ngokuyikhohlisa ukuba ishayele imoto yayo emgodini, ifike ekhaya ngesikhathi, kodwa uyise ka-Greg u-Frank onakalise amaswidi abo ngokuwaphambanisa abeve eshumini nambili futhi ewathela ngamanzi. UManny ube esetshela uSusan ngesigameko se-Snake Road, futhi u-Greg uvinjelwe isonto lonke ekudlaleni imidlalo yevidiyo.
Kamuva, ngesikhathi edlala i-tumble trike, u-Greg uphuka ingalo ka-Rowley ngephutha. USusan uyakubona lokhu kodwa unquma ukungamthethisi uGreg kakhudlwana. Kunalokho, ufuna ukuba enze okufanele futhi aphathe uRowley ngenhlonipho. Esikhundleni salokho, uGreg uzama ukuzuza engalweni kaRowley elimele, kodwa wenqatshwa nakakhulu abanye abafundi, abathanda uRowley futhi basole uGreg ngokuyiphula kuqala.
UGreg uzama indlela entsha ngokuba ngumdwebi wamakhathuni wephepha lesikole; U-Rowley unentshisekelo emcabangweni olahliwe owakhe, lapho umugqa ngamunye we-strip uthi Zoo-Wee Mama!; nokho-ke, uGreg ugcizelela entsha ayidalile, ecela uRowley ukuthi athuthukise eyakhe yamahlaya esikhundleni sokusebenzisana.
Funda kabanzi:- Abafazi Bangempela Bezindlu Beverly Hills Isizini 10
Ake Sibone UkwenziwaIdayari ye-Wimpy Kid
Amathuba esithombe sesine sesenzo esibukhoma ngemva kokukhishwa kweDiary of a Wimpy Kid: Izinsuku Zezinja ayemancane. UJeff Kinney, umsunguli weDiary of a Wimpy Kid noveli, wembula ngo-2012 ukuthi ingxenye elandelayo, Idayari Yengane Ene-Wimpy: I-Cabin Fever, izoshintshwa ibe isici esigqwayizayo.
UKinney uthe ubesebenza noFox esipesheli esiyisigamu sehora esisekelwe ku-Cabin Fever engxoxweni ye-Diary of a Wimpy Kid: Hard Luck, obekumele iqale ukusebenza ngasekupheleni kuka-2014. Okukhethekile bekufanele kube ukukhiqizwa opopayi okudaliwe. by 20th Century Fox Animation, futhi yayisemisebenzini ngenkathi uKinney esebenza kumamuvi abukhoma. Ngesikhathi sokukhiqiza, nokho, umbono washintshwa usuka kokhethekile waya ochungechungeni olupopayi.
Le phrojekthi yembulwa ukuthi iyaqhubeka nokuthuthuka ukuze isakazwe ku-Disney + ngo-Agasti 2019, kulandela ukutholwa kukaDisney kwe-21st Century Fox. Emcimbini we-2020 Disney Investor Day, iphrojekthi kubikwa ukuthi ivuselelwe njengesithombe esifakiwe sokuqalisa kabusha esibizwa ngokuthi I-Diary of a Wimpy Kid.
Kanye nalesi sitatimende, kwaqinisekiswa ukuthi ukuqoshwa sekuqalile, nosuku olungase lukhishwe maphakathi no-2020. Le filimu bekumele ikhishwe ngoDisemba 3, 2021, futhi kwaqinisekiswa ngoSepthemba 2021 ukuthi izobe iguqulelwe inoveli yokuqala ochungechungeni.
Funda kabanzi:- Ingabe Usuzwile Nge-Billie Eilish Documentary?
NgoDisemba 3, 2021, ifilimu yethulwa ku-Disney+. Ngaphezu kwalokho, incwadi yoqobo iphinde yakhishwa ngohlobo olusha lwekhava ye-Disney+ njengendlela ehlanganisa ifilimu. I-Amulet Books ishicilele ukulandelana kwenoveli yokuqala, kodwa kulokhu ngokubambisana ne-Disney Enterprises, Inc. kanye ne-20th Century Studios. NgoNovemba 23, 2021, yakhululwa. UJeff Kinney umemezele ukuthi ama-sequels asevele esebenza ngaphambi kokuqala kwesithombe sokuqala ngo-Okthoba 23, 2021.
UKinney uthe i-sequel, esuselwa ku-Rodrick Rules, izoshicilelwa ngo-2022 ngeDisney+ Day. UKinney uveze ukuthi uhlela ukuguqula zonke izincwadi zakhe zibe amafilimu e-Disney+ animated. Okwamanje akukaziwa ukuthi ifilimu izohlanganisa i-20th Century Animation.
Abadinwe Ukuqhamuka Nenhlanganisela Yamahlaya Nezothando
Isizini 5 Yabantu Abakhulile: Usuku Lokukhishwa: Kuqinisekisiwe noma Kukhanseliwe?